The Voice Myanmar က ပရိတ်သတ်တွေကို ပွဲဆူစေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ် နောက်ကွယ်ကလျှို့ဝှက်ချက်ကိုထောက်ပြလာတဲ့စည်သူမောင် - Thu Ta Myay
Home/Celebrity/The Voice Myanmar က ပရိတ်သတ်တွေကို ပွဲဆူစေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ် နောက်ကွယ်ကလျှို့ဝှက်ချက်ကိုထောက်ပြလာတဲ့စည်သူမောင်
The Voice Myanmar က ပရိတ်သတ်တွေကို ပွဲဆူစေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ် နောက်ကွယ်ကလျှို့ဝှက်ချက်ကိုထောက်ပြလာတဲ့စည်သူမောင်
ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စည်သူမောင်ကတော့ အခုချိန်ထိလည်း အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကို ရရှိနေဆဲပါနော်။စည်သူမောင်က မိဘအပေါ်မှာလည်း သိတတ်လိမ္မာတာကြောင့် မကျန်းမာတဲ့မိခင်ကို ဘေးနားကနေ သေချာဂရုစိုက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်း ခန့်ညားနုပျိုနေဆဲဖြစ်တဲ့ စည်သူမောင်ကတော့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေရလောက်အောင် ချောမောတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ်အားပေးမှုအများဆုံးရရှိနေတဲ့ The Voice Myanmar (Season 3) ရဲ့ Blind Audition မှာ ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ မူရင်းအဆိုရှင်ကိုမေ့ထားပြီး နောက်မှပြန်ဆိုထားသူ အဆိုတော်ကိုသာ နာမည်တပ်လိုက်တဲ့အတွက် လူပြောများခဲ့တာပါ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စည်သူမောင်က သူ့ရဲ့အမြင်ကို အခုလိုပြောလာခဲ့ပါတယ်ကိုRကြီးနဲ့က ဟိုးအရင်ထဲက ခင်လည်းခင်တယ် လေးလဲ လေးစားရတယ်…အနုပညာသမားအချင်းချင်းကတော့ မသိပဲပြောမယ်လို့ မထင်ပါဘူး.
တွေးမိတာတစ်ခုက Program Script ကြောင့်များလားပေါ့၊ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုအာဇာနည် ကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ ဖြစ်သွားမယ် မထင်ပါဘူး လို့ စည်သူမောင်ကပြောလာခဲ့တာပါ“တမျိုးတော့ခံစားရတာပေါ့နော် ကိုယ်လုပ်တဲ့ အနုပညာပေါ်မှာ ကျော်သွားသလို ခံစားရတာပေါ့ဒါပေမယ့် ဇာနည်ကနေတတ်ပါတယ် အေးအေးဆေးဆေးပဲ သူ့ကိုတော့တကယ် appreciate လုပ်တယ် တခြားသူတွေကိုလည်းဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး ” လို့စည်သူမောင်ကဆိုလာခဲ့တာပါ ပရိသတ်ကြီးရေဒါကတော့ စည်သူမောင်က အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar ရဲ့ blind audition အပေါ် သုံးသပ်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်
ရုပျရှငျမငျးသားတဈယောကျဖွဈတဲ့ စညျသူမောငျကတော့ အခုခြိနျထိလညျး အနုပညာအလုပျတှလေုပျကိုငျလြှကျရှိပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုတှကေို ရရှိနဆေဲပါနျော။စညျသူမောငျက မိဘအပျေါမှာလညျး သိတတျလိမ်မာတာကွောငျ့ မကနျြးမာတဲ့မိခငျကို ဘေးနားကနေ သခြောဂရုစိုကျပေးနတောဖွဈပါတယျ။အခုခြိနျထိလညျး ခနျ့ညားနုပြိုနဆေဲဖွဈတဲ့ စညျသူမောငျကတော့ နှုတျခမျးနီမလေးတှဝေိုငျးဝိုငျးလညျနရေလောကျအောငျ ခြောမောတာဖွဈပါတယျနျော။
ပရိသတျအားပေးမှုအမြားဆုံးရရှိနတေဲ့ The Voice Myanmar (Season 3) ရဲ့ Blind Audition မှာ ပွိုငျပှဲဝငျ တဈဦးဝငျရောကျယှဉျပွိုငျတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျရဲ့ မူရငျးအဆိုရှငျကိုမထေ့ားပွီး နောကျမှပွနျဆိုထားသူ အဆိုတျောကိုသာ နာမညျတပျလိုကျတဲ့အတှကျ လူပွောမြားခဲ့တာပါ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသတျပွီး စညျသူမောငျက သူ့ရဲ့အမွငျကို အခုလိုပွောလာခဲ့ပါတယျကိုRကွီးနဲ့က ဟိုးအရငျထဲက ခငျလညျးခငျတယျ လေးလဲ လေးစားရတယျ…အနုပညာသမားအခငျြးခငျြးကတော့ မသိပဲပွောမယျလို့ မထငျပါဘူး.
တှေးမိတာတဈခုက Program Script ကွောငျ့မြားလားပေါ့၊ ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ ကိုအာဇာနညျ ကတော့ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ဘာမှ ဖွဈသှားမယျ မထငျပါဘူး လို့ စညျသူမောငျကပွောလာခဲ့တာပါ“တမြိုးတော့ခံစားရတာပေါ့နျော ကိုယျလုပျတဲ့ အနုပညာပျေါမှာ ကြျောသှားသလို ခံစားရတာပေါ့ဒါပမေယျ့ ဇာနညျကနတေတျပါတယျ အေးအေးဆေးဆေးပဲ သူ့ကိုတော့တကယျ appreciate လုပျတယျ တခွားသူတှကေိုလညျးဝဖေနျတာတော့မဟုတျပါဘူး ” လို့စညျသူမောငျကဆိုလာခဲ့တာပါ ပရိသတျကွီးရဒေါကတော့ စညျသူမောငျက အငွငျးပှားမှုတှဖွေဈခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar ရဲ့ blind audition အပျေါ သုံးသပျပွခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော